JINGHPAW KASA: ကေအိုင်အို ဌာနချုပ်ဟောင်းအနီး ဗမာစစ်သား (၂၀) ကျ
ကချင်ပြည်နယ် ကေအိုင်အိုအစိုးရ တပ်မဟာ (၅) လက်အောက် ကေအိုင်အို ဌာနချုပ်ဟောင်းဖြစ်သော နဖော့ အနီး အူဂေါ့ တွင် ကေအိုင်အေ တပ်ရင်း (၂၈) မှ မျိုးချစ်ရဲဘော်များနှင့် ဗမာအစိုးရ စစ်တပ်သို့ ဒီဇင်ဘာ (၉) ရက် နေ့လည် (၁၂း၀၀) နာရီအချိန်ခန့်တွင် ပြင်းထန်စွာ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ဗမာစစ်သားများ ဂန်ဒေါင်ယန်ဘက်မှ ထိုးစစ်ဆင်လာသည်ကို ကေအိုင်အေ မျိုးချစ်ရဲဘော်များ မိုင်းများဖြင့် ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ရာမှ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလာဖြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ တိုက်ပွဲတွင် ဗမာအစိုးရ စစ်သား (၂၀) ခန့် သေဆုံး ဒဏ်ရာရရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
There wasaseveral battle between KIA (28) battalion and Burmese Government troops in U Gaw, near the Na Hpaw, KIA former head quarter, at 12:00 noon on 9th December according to the KIA front line officer report. KIA’s patriotic soldiers exploded with mine those who invaded Burmese troops from Gan Dau Yang and 20 Burmese soldiers were injured and died.
Grai na kabu sai.Grau nna myen ni hpe law law lu sat u ga.
GRAI HKRAT SAI
kia တွေ တော့ ဘုရားသခင် စောင့် ရှောက်တော့ မ သေ တာ ပေါ့ နော် ကသိုင်း တောင် ပေါ် တော့ အတုံး အရုံး သေခဲ့ တာဘဲ နော် အဲ့ ဒါတွေအ ကျယ် တဝင့် မ ဖော်ပြ ပါလား
မော် မောင်းဘွမ် မှာ သေ တာ လဲ မနည်း ဘူး ဆို ဘဲ ။အဲ တာ မျိုး တော့ တိတ် နေ ကြ တယ်။